Somaliland iyo Khaatumo oo heshiis 5 qodob ka kooban kala saxiixday (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Somaliland iyo Khaatumo oo heshiis 5 qodob ka kooban kala saxiixday (DHAGEYSO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa waxay sheegayaan in heshiis 5 qodob ka kooban ay maanta halkaasi ku kala saxiixdeen maamulada Somaliland iyo Khaatumo State.
Mas’uuliyiin kala matalaysa labadaasi dhinac ayaa kala saxiixday heshiis ka kooban 5 qodob, waxaana goobta heshiiskaas lagu kala saxiixanayay goobjoog ka ahaa madaxweynaha maamulka Khaatumo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland.
Qodobada ay labada dhinac kala saxiixdeen ayaa u dhignaa sida hoose ku xusan:-
1- Somaliland iyo Khaatumo inay ku dadaalaan sidii afgarad buuxo loo wada gaari lahaa.
2- In la wada qorsheeyo, lagana wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa Somaliland loo wada siman yahay oo ku dhisan cadaalad, maamul wanaag iyo xaq dhowrista xuquuqal iinsaanka, ku dhisan diinta islaamka oo muwaadiniinteedu midna ku ahayn marti balse ay u wada siman yihiin.
3- In dastuurka Somaliland la furo si loo xaqiijiyo awood qeybsi sugan oo cadaalada ku dhisan oo laga sameeyo madaxda golayaasha fullinta, sharci dejinta, garsoorka iyo hay’adaha dowliga ah.
4- In la sameeyo maamul daadejin heer gobol, degmo iyo magaalo lana qeexo mid walba awoodeeda.
5- In shir dambe la iskugu yimaado 10-ka July laguna qabto magaalada Burco, si loo dhameeyo wixii qabyada ah lagana tashado qaabkii iyo hanaankii loo qaban lahaa shir loo wada dhan yahay.